(sno) news » koox qaraxyo kagaysan lahayd maraykanka oo denbigoodii qirtay. – Bestcoloncleansers.org
(sno) news » koox qaraxyo kagaysan lahayd maraykanka oo denbigoodii qirtay.
Daniel Buuyid ayaa maxkamad ku taala waqooyiga karolina ee dalka mareekanka wuxuu ka hor qirtay in ay wadeen qorsho ay ku doonayeen in ay qaraxyo iyo afduub ka fuyliyaan gudaha dalkaasi Mareekanka.
Daniel ayaa sidoo kale sheegay in uu madax u ahaa 7 qof oo iska abaabulay gudaha mareekanka kuwaasoo doonayay in ay qaraxyo ka geestaan goobo badan oo ka mid ah dalka mareekanka.
Ciidamada ammaanka ee mareekanka ayaa sii daayay cajal video ah oo uu duubay daniel isagoo ka hadlayay dhibaatada ay ciidamada mareekanka ku hayaan dadka muslimiinta ah, sidoo kale hadaladiisa waxaa kamid ahaa waan jeclahay jihaadka, iyo in aan ilaahey dartii u dagaalamo.
Buuyid aya wuxuu degenaa meel ay ku yaryihiin muslimiinta, ciidamada police-ka federalka ee mareekanka ayaa qabtay isaga laba canig uu dhalay iyo 4 qof oo kale, waxaa lagu wadaa in la xukumo ninkaas bisha sebtember ee sanadkan iyadoo lagayaabo in lagu xukumo xabsi daa’in.
Mareykanka oo ka digay in argagixisada ku soo badanayaan gudaha dalkiisa
Wasiiradda amniga qaranka ee mareekanka Janet Napolitano ayaa sheegtay in dhibaatada argagixisada ay la doonayaan mareekanka ay gaartay heerka ugu sareeso tan iyo weeraradii 11 sebtember ee sandii 2001-ka.
Napolitano ayaa intaasi ku dartay xilli ay la hadleesay Congress-ka mareekanka in ay badatay qatarta argagixisada iyadoo kooxo badan oo ku sugan gudaha mareekanka ay hanjabaad u jeediyeen dalka mareekanka, kuwaasoo tilmaamay in ay qaraxyo ka sameyn doonaan gudaah dalkaas.
Janet Napolitano ayaa tusaale u soo qaadatay Cumar Faaruuq Cabdul Mudhalib oo isku dayay in uu qarxiyo diyaarad uu lahaa Mareykanka oo ka timid magaalada Amsterdam ee dalka Holland ka hor inta aysan gacanta ku dhigin ciidamada ammaanka ee dalkaasi.
Wasiiradda ayaa sidoo kale ugu baaqday ciidamada dalka in ay samayeen dadaal dheeri ah oo ku aadan sidii looga hortagi lahaa argagixisada iyadoo dalka Mareykanka tan iyo 2009-ka lagu xiray 60 qof oo heysta dhalashada Mareykanka oo lala xiriirinaya in ay qorsheenayeen in ay falal aragagixiso ka fuliyaan gudaha mareekanka kuwaasoo la sheegay in ay ka tirsanaayeen ururka Alqacida.
Xulka Wararka Caalamka
Si Fudud Nagu booqo www.codkadalka.com
Xafiiska warqabadka Nairobi, Kenya
Previous Previous post: Wararka soomaaliya
Next Next post: On line what does soma look like » enter approved canadian rx main page – on line what does soma look like